About Us - Fancyco Co., Ltd
Ugwayi Ukugoqa izinto
Fancyco watholakala ngo 2004. Inkampani yethu baba umphakeli yegolide Alibaba engaphezu kwengu-14. Kwakuyisikhathi abalulekile yenguquko 2005 esinakho embonini yethu siqu. Ngo-2015 Fancyco ngempumelelo langena Nigeria ne-Uganda emakethe futhi usethe No.1 umkhiqizo sticker iphepha nenhlanzeko imikhiqizo kula mazwe. Manje thina ezikhethekile nokupakisha nowokunyathelisa izinto. Ngokuzayo sizobe ukubeka isithakazelo ikhasimende kanye nezidingo emakethe endaweni yokuqala, sizibandakanya ukuze wanelise izidingo amakhasimende 'nokulindela, futhi isevisi esiseduzane nawe.
elabhorethri yethu ine a wokuhlola abasebenzi professional, isiqinisekiso kokunikela amaklayenti imikhiqizo afanelekayo esekelwe ukuhlolwa Equipments eziphambili. Zonke abasebenzi kulolo vivinyo kazwelonke ukuhlolwa ziqu noma umkhakha ziqu luhlolo. Inkampani izigidi lemali ukuthenga QC Equipments eziphambili, kuhlanganise Melt Flow Speed ​​Inkomba, Uyinki Friction Inkomba, American Aglient negesi Chromatogram wensimbi, umswakama Imitha, American X-Rite Spectrophotometer nokunye. Lezi Equipments eziphambili futhi indinganiso ephakeme uhlelo QC yibhange inkampani ukuphepha endleleni uyaqhubeka imikhiqizo emisha kanye nentuthuko.
imikhiqizo main yenkampani zingahlukaniswa izigaba ezimbili: umuntu efake futhi izinto zokunyathelisa (zihlanganisa: iphakethe aseptic, usikilidi iphakethe, ukukhangisa kanye izinto zokunyathelisa digital, njll); omunye ukuhlanzeka kanye umkhiqizo sanitary (inabukeni, ukuqeqeshwa ibhulukwe izinsingo zokushefa ezilahlwayo, ngaphansi pad, napkin, njll)
Silwela ukuthi umkhiqizo izinga kuyinto kuchudzelana kwetfu ukhiye, ukulandela isimiso iqhakambisa kwamakhasimende kanye emisha continuously.to abe ibhizinisi unqambothi emhlabeni wonke.
Ngu-2016, sinalo 5 zokuhweba, 77 emisha patent, 4 wesifundazwe Technology R. & D. Centres, lidlule izitifiketi international ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, IS022000, SGS, NJLL
※ Izinsiza kusebenza
Flexo Phrinta System, Rotogravure Phrinta System, Heidelberg Offset Phrinta System, uDavide-Standard yokuvikela ngocwazi System, HL yokuvikela ngocwazi System, yaseSwitzerland LF-IV700 / CH Flame ukubekwa uphawu System, Okugcwele-okuzenzakalelayo Dia-Cutting System, wamnquma Machine, Intelligent QC Machine, DH IMAVISION QC, okuzenzakalelayo Ukupakisha & Delivery System
Inkampani yethu wasungula ozinzile futhi lwesikhathi eside naleyo amaklayenti esuka eNingizimu Asia, empumalanga Ephakathi, e-Afrika nase-South America. Phakathi naleso sikhathi 'Toptac' 'lokuhweba OTAC' ibhalisiwe yikhasimende lethu emakethe futhi osungulwe ejensi e Pakistan.
Sizoxoxa ngalokho ungase zithinta, ukuhlangabezana lokho kungase kudingeke, Ukuhlinzeka ngemisebenzi izinga nge ngemali ephansi ukuthi idlula okulindelwe amakhasimende ethu ukuba nodumo. Thina ukuhlanganisa, ubuqotho ukwethenjwa nokuhlonishwa tonkhe tincenye ibhizinisi lethu